SomaliaReport: Dagaalada Muqdisho iyo Gedo: 9 Qof ku Dhinteen
Ugu yaraan sagaal baa ku dhimatay dagaalo ka kala dhacay magaalada Muqdisho iyo magaalo ka tirsan Gedo, waa sida ay saraakiishu warka u dhigayaan.
Shan ka mid ah dhimashada ayaa ka dacday Muqdisho ka dib dagaalo ay ciidamada dawladda ku meel gaadhka ah oo garabsanaya kuwa nabad ilaalinta afrikaanka ee loo yaqaan AMISOM ay weeraro ku qaadeen aagag dhanka waqooyi ee muqdisho ah oo ay ku sugan yihiin malayshiyada al-Shabaab.
Ciidamada dawladda iyo xoogagga al-Shabaab ayaa labada dhan kala sheegtay guulo ay ka gaadheen dagaal ka dhacay xaafadda Boondheere oo ku taal waqooyiga Muqdisho.
Afhayeenka dhanka hawlgallada milatari ee al-Shabaab, Sheekh C/caziiz Muscab ayaa saxaafadda muqdisho ku yidhi “Waxaan dib isaga celinay weeraradii ay nagu so qaadeen ciidanka dawladda iyo kuwa AMISOM, in kasta oo ay waxyeelooyin dhankayaga ah jiraan”.
Abaanduulaha ciidamada dwladda ku meel gaadhka ah, jeneraal C/kariin Yuusuf ayaa sheegay inay iyagu la wareegeen aagaggii lagu dagaalamay, wuxuuna ka gaabsaday inuu faahfaahin ka bixiyo dhimashada dhanka dawladda. Dagaalada oo wali socda dartood ayaynan suurogal u ahayn in faahfaahin laga bixiyo.
Waxaa dhanka kale maalintii labaad galay dagaalada ka socda magaalada Busar ee gobolka Gedo halkaas oo ay afar ruux ku dhinteen. Xoogagga al-shabaab ayaa sheegtay inay u awood sheegteen ciidamada dawladda ku meel gaadhka ah oo isku dayay inay kala wareegaan Busar.
Dawladda iyo AMISOM ayaa guulo ka so hoyay dagaaladii dhawaa iyaga o meelo badan la wareegay muqdisho dhanka kalena magaalooyin muhiim ah oo ku yaala xudduudaha gacanta ku dhigay. Waxaa socda qorshihii lagula wareegi lahaa gobolka Gedo, Jubbada hoose iyo magaalada saldhigga u ah ururka al-Shabaab ee Kismaayo. Waxaase aan la hubin inay dawladda ku meel gaadhka ahi hayso awoodo Milatari oo ku filan si ay u hirgaliso qorshahaas.